Tilmaamo si aad gaarigaaga uga ilaaliso qabowga iyo heerkulka hoose | Ragga Stylish
Jiilaal baa yimid. Iyada oo heerkulka hooseeya tallaabooyinka qaar waa in la qaadaa si looga hortago in baabuurteennu ay dhibaato ka soo gaadho inta loo baahan yahay.
In kasta oo xilliga xagaaga baabuurta aan laga dhaafi karin dhibaatada kulaylka, habeen dhaxan ah oo furan ayaa waxyeelo badan keeni kara. Ka ilaalinta gaarigaaga dhaxanta waa in mudnaan la siiyaa.
1 Ka fiican amaan ka xumahay
2 Ha u isticmaalin biyo xaalad kasta oo jirta
3 Digniinta gawaarida naaftada ah
4 Ma seexataa wadada? Tallaabooyin gaar ah oo gaarigaaga uga ilaaliya qabowga
Ka fiican amaan ka xumahay
Marka heerkulbeeggu bilaabo inuu hoos u tilmaamo, cabbiraadaha ugu horreeya waa in la qaadaa. Hubinta batteriga ayaa ah kan ugu horreeya, maadaama qabowgu uusan si gaar ah faa'iido ugu lahayn iyaga. Baabuurta seexda wadada waxay ka heli karaan buste ku habboon dusheeda oo aad waxtar ugu leh, gaar ahaan baytarigooda.
Waxaa jira sidoo kale hubi xaaladda qaboojiyaha. Haddii ay leedahay midab hufan, waxaa lagugula talinayaa inaad si buuxda u beddesho ka hor intaan habeennada qabow aysan soo gelin. Markuu dareerahani leeyahay astaamahan, waxay u nugul tahay qabowga.
Ha u isticmaalin biyo xaalad kasta oo jirta
Mana aha qaboojiye deg-deg ah, ama in la buuxiyo hawo-mareenka mashiinka mashiinka dhaqa. Biyuhu uma baahna heer kul ka hooseeya eber darajo si ay u barafoobaan.
Digniinta gawaarida naaftada ah
Shidaalkan ayaa loo malaynayaa inuu gaadhayo meel baraf ah oo -20 ° C. Si kastaba ha noqotee, dhacdooyinka murugada leh ee heerkulka aadka u daran ma aha wax aan caadi ahayn. Suuqa dhexdiisa waxaa laga heli karaa waxyaabo lagu daro oo shaqadooda ay tahay in laga fogaado dhaxanta "dhiigga" ee dhaqaajinaya gaarigaaga.
Ma seexataa wadada? Tallaabooyin gaar ah oo gaarigaaga uga ilaaliya qabowga
para ka hortag lakabka barafka inuu ka sameysto daaqadaha gadaashiisa iyo hore, aluminium sunshade ayaa loo isticmaali karaa. Haddii mid la waayo, waa lama huraan in laga tirtiro masaxayaasha muraayadda. Haddii kale, waxaad halis ugu jirtaa inaad ku dhagto galaaska.
Qiyaas kale oo la qaado si gaarigaaga looga ilaaliyo dhaxanta waxaa ka mid ah qufulada. Si looga hortago inay biyuhu gudaha galaan oo ay adkeeyaan gudaha, waxaad isticmaali kartaa cajalad dahaadhan. Hadday si isku mid ah nidaamku u shaqeyn waayo oo fure uusan u leexan, xoog caayaan in la isku dayo in lagu qasbo maahan ikhtiyaar. Waa inaad isticmaashaa qalajiyaha timaha ama biyo kulul si aad u dhalaalisid waxa gudaha ku jira.
Ilaha sawirka: Quadis /
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » motor » Sidee looga ilaaliyaa gaarigaaga dhaxanta?
Sannadka Cusub, jaakad ama jaakad?